24 ee ugu Fiican Fekerka 'Tattoos Kulanka' Fikirka Naqshadaha Haweenka - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
24 ee ugu Fiican Fekerka Fikradda Dhaqanka ee Dumarka
Raadi oo ku badbaadi habka ugu wanaagsan ee loogu talagalay dib u dhiska sawirrada ee haweenka. Kaliya xulo qaar ka mid ah qaar ka mid ah tattoo dhejinta yar yar ee shaqada ku shaqeeya.
1. Dhaqdhaqaaqa Tartanka Dhegaha
Dhawaan, tattoo sida gadaashka ah ee tattoos # waxay noqdeen waxa dad badan oo isticmaalaya si ay u sameeyaan aragti ka baxsan.
2. Cute Behind Tattoo Ear
Adigu aad u diyaargarow maqaarka, wali waxay ku fiicnaan laheyd in lakulo taatuuga ka dambeeya tattoo dhagta. A # dhuuban sida tan waxay u badan tahay inaad ka dhigto inaad ka baxdo dadka badan. Maxaad u maleyneysaa?
3. Ubaxa wuxuu ku daboolaa Tattoo Ear
Dhabarka tattoo ee dhagxan leh ayaa midabkiisu u eg yahay ubax. Waxaa jira noocyo kala duwan oo ubax ah oo aad isticmaali kartid haddii aad ka fekereyso inaad taatin aad u hesho adigu.
4. Qabsan Tawfadhka Dhegaha
Iskutallaab ka danbeeya tattoo dharka ayaa noqday hal tattoo oo isbedelaya noloshaada weligiis. Waxay leedahay wax aad u muhiim ah in la xidho. Tani waa sababta aad u awoodi karto in aad xakamayso naqshadeynta tattoo this.
5. Jacayl ka dambeeya tattoo dhagta
Haddii aad raadinayso inaad ka sii darto tattoo dhegta ka dibna waxay noqon kartaa mid si gaar ah waxtar u leh si aad u ogaato meelaha qaarkood oo aad ka heli karto tattooada qiimaha la awoodi karo. Markaad sidan sameyso, waxay noqoneysaa mid aad u fudud in laga dhigo sawirka dhegta ee cabbir kasta.
Iyada oo horay loo mariyo tiknoolajiyadda, waxaad ku yeelan kartaa qurux badan super-ta dambe ee tattoo dhegta. Waxaa jira noocyo farabadan oo ah nooca tattoo ah. Markaad haysato tattoo tani, dad badan ayaa ku baraarujin lahaa.
7. Dhaleeceynta dharka
Waxaa jira meelo badan oo aad u fiican oo aad ka heli karto gadaashiisa. Tattoo wuxuu noqday mid ka mid ah caan ku ah adduunka oo dhan, nashqadeeyana wakhti uma qaadin inuu ku dhammeeyo qiime la awoodi karo.
8. Cagaha oo ka danbeeya dharbarka dhegta
Miyaad aragtay shakhsiyaadka noocaan ah ee ka danbeeya tattoo dhegta? Sanadihii u danbeeyay, dad badan oo ku cusub tattoo sawirka ayaa la yaabay si ay u arkaan nooca tattooca ah ee dhagta ee dhegta gadaasha.
9. Dhabarka ka dambeeya tattoo dhegta
Maanta, waxaan aragnaa tiro aad u badan oo shaqsiyaadka ah oo si muuqata u soo jiidanaya muuqaal caadi ah oo ka danbeeya muuqaalka sawirada dhagta ee dhegta sababta oo ah sida quruxda ay u egyihiin.
10. Jacayl ka dambeeya tattoo dhegta
Faahfaahinta ka dambeysa tattoo dhagta ayaa noqotey waxa uu qof walba doonayo inuu ogaado. Habka loo qorsheeyey wuxuu dhigayaa inuu qaboobo si aan loo helin sida midabka maqaarka.
11. Qodobka danbe ee tattoo dhagta
Qaar badan oo ka mid ah shakhsiyaadka, helitaanka kantaroolka tattoo dhagta ayaa u jeestay wax ay dadka kale rabaan inay helaan. Sababta tani waa sababta oo ah sida jilicsan u fiirsanayo qofka xiran.
12. Dhabarka ka danbeeya tattoo dhegta
Markaad hesho cajaa'ib tattoo ah, ma caawin kartid laakiin u sheeg qof kasta oo ku hareeraysan. Tani waa sababta aad u hubin lahayd inaad leedahay qaab quruxsan.
13. Star ka dambeeya tattoo dhagta
Waxaan aragnay shakhsiyaadka qallajinaya tattoo laakiin marka ay heystaan ​​xiddigaha ka danbeeya dharka tattoo, wax waliba isbedelaan. Tani waa sababta aan u aragno dad badan oo u socdaasha tattoo.
14. Weyn ka dambeysa tattoo dhagta
Waxaa jira waxyaabo badan oo la heli karo taas oo ka dhigeysa tan weyn tattoo dhegta. Si kastaba ha noqotee, adeegsiga adeegyadda tattooist oo xirfad leh ayaa dhigaya inay qiimo leedahay.
15. Ubaxa ka dambeeya tattoo dhegta
Ubaxa ka dambeeya tattoo dhagta ayaan bilaabin maanta. Dad badan oo jecel tattoo waxaa had iyo jeer lagu arkaa taatuuga ubaxa.
16. Cadaalad ka danbeeya tattoo dhagta
Waxaa jira qurxiyo badan oo adduunka ah. Si kastaba ha noqotee, adiga ayaa dooranaya nooca qurxinta ee loo adeegsan lahaa dhegtaada.
17. Dove ka dambeeya tattoo dhegta
Qoollo waa jilayaal quruxsan iyo haddii aad tahay qof nabad ah, hubi inaad haysato qoollada ka dambeysa tattoo dhagta ee udubdhexaad u ah si ay wax uga qabato caqabado nololeed oo badan.
18. Taabbada ka dambeeya tattoo dhagta
Ma jeceshahay tattoo this? Ma aha in qof waliba ku dhiirri geliyo inuu shaaca ka qaado sida shaabadan ka dambeeya tattoo dhagta ee adiga kuu gaar ah marka la qoro.
19. Gabadha qurxoon ee ka dambeysa tattoo dhagta
Cusbooneysiinta loo adeegsanayo gabadha qurxinta ee ka dambeysa tattoo dhagta ayaa si fiican loogu muujin karaa iyagoo sawiraya jidhkaaga.
20. Rose ka dambeeya tattoo dhegta
Hadda, waxaad aragtay sababta dad badani ay u isticmaalayaan gadaashooda tattoo dhagta. Naqshaduhu aad ayay u qurxoon yihiin, mana qaadanayaan meelo badan.
Fiiri jidka sidan ka dambeeya sawirka dhegta u eg. Waa kuwa kaliya ee jecel in ay tattoo ku qanci karaan tattoo this.
21. Smart ka dambeeya tattoo dhegta
Tegashada dharka dhagta ayaa noqday mid ka mid ah sawirrada badan ee gabadhu u isticmaali karto sidan oo kale.
22. Ka soo horjeeda tattoo dhegta
23. Tufan ka danbeeya tattoo dhegta
Haddii ay dhacdo in aad ka fekereyso helitaanka baali ka dambeeya tattoo dhegta, waa in aad iska dhigtaa fursadaada si aad u damaanad qaadato inaad ugu fiican tahay.
24. Blue Star oo ka dambeeya tattoo dhagta
25. Cherry Blossoms soo jiidashada sawirada tintoo biyaha gadaashooda gadaasha gabdhaha
ku dhaji tattoossawir gacmeedtattoosgaraacista gacmahawaxaa la dhajiyay tattoosnaqshadeynta mehndiTattoos Wadnahatattoo indhahaTartoo ubax badantattoos qoortalibto libaaxtattoo biyo ahjimicsiga bisadahalammaanahamuusikada muusikadatattoos ubaxtattoos moonkoi kalluunkatattoos gacantatattoos qabaa'ilkatattoo maroodigatattoos sleevefikradaha tattootattoos saaxiib saxa ahcalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahTattoo Feathertattoos taajkiishaatiinka shiidansawirrada raggaTattoo infinitysawirada malaa'igtatattoos qorraxdatattoos cagtatattoos qosol lehtaraagada kubbaddatattoos iskutallaabtagadaal u laabowaxay jecel yihiin tattoosTilmaamta jaalaha ahsawirada gabdhahaDhaqdhaqaaqatattoo dheemantattoos eaglehenna tattooJoomatari Tattooslaabto laabtashimbir shimbirtattoo tilmaanarrow Tattootattoo ah octopus